Accueil > Gazetin'ny nosy > Mpikarama an’adin’ny Hvm: Nifanjevo tamin’ny fizarana vary
Mpikarama an’adin’ny Hvm: Nifanjevo tamin’ny fizarana vary
Hetsika roa momba ny tontolon’ny fahasalamana no nitranga teto Antananarivo omaly maraina. Ny voalohany dia ny fanamarihana ny Herinandron’ny fahasalaman’ny Reny sy ny zaza izay natao tetsy amin’ny Hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona etsy Ampefiloha, ary ny faharoa dia ny fanombohan’ny fanentanana ny fanaovam-bakisiny aty Afrika, izay natao tetsy amin’ny Lapan’ny kolotsaina sy ny fanatanjahan-tena etsy Mahamasina.
Ity notanterahina tetsy Mahamasina ity dia nahitana tranga tena mahavariana satria teo aloha ny fampanantenana an’ireo sahirana tany anivon’ny fokontany isan-tsokajiny tany vola 5000 ariary, ho tambin’ny fanotronana an’io hetsika io, nefa dia zara raha nahazo 3000 ariary ny maro. Ny sasany aza toa 2000 ariary no nomena azy. Rehefa tonga teny amin’ny Lapan’ny kolotsaina sy ny fanatanjahan-tena indray dia ny fizaram-bary no tena niaretan’ireo maro teny, nefa dia ady saritaka, fifanjevoana tsy nisy toa izany no nitranga rehefa vita ny lahateny sy ny fihetsiketsehana ara-panjakana ka nirosoana ny fizarana ny vary.
Teny anoloan’ny Hôpitaly Ravoahangy Andrianavalona aloha dia nisy koa ireo nokaramaina nilanja sora-baventy, izay saika maneho fanohanana an-dRajaonarimampianina. Tsy sorabaventy nataon’ny olom-pirenena izy ireny na avy amin’ny antoko pôlitika manohana azy na avy amin’ny fikambanana fa ny fitondram-panjakana no nanao azy satria dia nitovy avokoa ny endrika ny soratra, ny lokony, ny lamba nanoratana azy. Isan’ny hita tao amin’ireny sora-baventy ireny ny hoe “matoky ny fahendrenao izahay Andriamatoa Filoha Rajaonarimampianina”.
Mampahatsiaro ny kabary nataon’ny mpila anditra tamin’ny volana janoary 1972 hoe “tsy mbola teraka ny handimby anao Andriamatoa Filohampirenena Tsiranana.” Nisy nitovitovy tamin’izany koa tamin’ny faramparan’ny Repoblika faharoa, izay nanohanana an-dRatsiraka.
Fa ny tena nahavariana ary niteraka fahatezerana teo amin’ny Sampan’ny Firenena Mikambana misahana ny fahasalamana (Oms) dia ny fahasahian’ny filohampirenena Rajaonarimampianina niteny teo imason’ireo tompon’andraikitra isan’ambaratongan’ny tontolom-pahasalamana eto hoe “ireto motô ireto dia fanampiana avy aminay mivady mba hanamoranareo ny asanareo”. Nisy môtô nozaraina mantsy teny amin’ny lapan’ny fanatanjahan-tena sy ny kolotsaina teny Mahamasina omaly. Tezitra ireo avy amin’ny rafitra ny “Oms” satria “ireo môtô ireo dia avy aminay “Oms” ka nahoana no nambara fa avy amin’ny filohampirenena mivady?”, hoy izy ireo.
Ho an’izay nandre izany fanamarihana izany aloha dia sany nanamarika fa tena fisolokiana no nataon’ny filohampirenena. Tsy voalohany izao no nitrangan’izany fa tamin’ireny voina sy takaitra nateraka ny rivo-doza teto ireny tamin’ny fotoam-pahavaratra farany teo dia efa niharihary koa ny nampiasan-dRtoa vadin’ny filohampirenena Voahangy Rajaonarimampianina ny anarany tamin’ny fanolorana fanampiana sy fitaovana ho an’ny tra-boina nefa ireo fanampiana avy amin’ny Fianakaviambe iraisam-pirenena izay natolotra ho an’ny firenena Malagasy no natolotra ny vadin’ny filoha tamin’ny anarany. Fisolokiana koa izany.
Izany no ataon-dry zareo nefa dia sahiny ny maniraka olona hanao mpikarama an’ady milanja sora-baventy milaza hoe “matoky ny fahendrenao izahay, Andriamatoa Filoha Rajaonarimampianina”. Fahendrena ve izany? Asa aloha na izany indray no fahendrena amin’izao taona 2018 izao fa mety ho efa nilaozan’ny toetrandro izahay?